Ushiya angalazi ’unina’ kaMampintsha ngoBabes
BEKUMNANDI kudelile ngempelasonto uMampintsha eshadelwa uBabes Wodumo nosekucasula unina kaMampintsha Isithombe: INSTAGRAM
Bongiwe Zuma | April 27, 2021
SEKUQUBUKE indida kusabalala i-video yowesifazane ozibiza ngonina womculi obeshadelwa ngempelasonto noveza ukuthi akamfuni noma ambone umakoti wakwakhe.
Lo wesifazane osesabalele ezinkundleni zokuxhumana ezahlukene uveza ukuthi yena wamthwala izinyanga eziwu-9 uMampintsha kodwa usezoshiwa ngaphandle uma sebeshada.
Ukhala ngokuthi uBabes Wodumo “uyisikhathi sini” njengoba esetshelwa ukuthi womenywa ngomshado omhlophe.
"Yimina umama kaMandla wangempela owamthwala izinyanga eziwu-9 ekugcineni sengizodomorozizwa yilo makoti omusha obhedayo. Umakoti uthi thina asigcine ukufika noma sofika ngomshado omhlophe. Ngicela ukwazi ngempela ukuthi ningashada kanjani ngingekho, obani laba enibambesayo? Angibazi," kusho lo wesifazane.
Eqhuba usole nabantu abaqopha lolu hlelo, Uthando Lodumo, okulindeleke ukuthi lukhonjiswe kwithelevishini, ukuthi abanalo iqiniso ngoba bekumele konke kuqale kuye kubekhona nakukhokhelwayo njengokuvela kwakhe ohlelweni. Ukhale nangokuthi sebeqophile kumele engabe kukhona imali asebeyikhokhelwe.
Uphinde waveza nezinsolo zokuthi uBabes akakhulelwe konke kwamanga ufaka izidwedwe ukwakha isisu.
"Akakhiphe isimpontshi azale ingane yena. Ngilinde izingane ezamawele ayethembise ukuthi uzowabeletha, aphi ngoba awekho amawele. Ngikhulekela ukuthi uMandla wami uNkulunkulu amvikele kulabo sathane aqomene nabo. Ngeke usindisiwe ushadele kubantu abakholelwa emadlozini abangasindisiwe bese ubungqo," kusho lo wesifazane.
Uphinde washiya angalazi kuyise kaMampintsha amsola ngokuthi isigebengu esidala esasintshontsha esesiqhamuka nezihlobo zaseChesterville angazazi.
Uthe ukutheleka kulo mshado egqoke ophaca ukwenze ngenhloso ngoba bakhohlisiwe kwathiwa bazothengelwa izingubo kodwa lutho.
Uyise kaMampintsha uthe ugijime wahamba nonkosikazi wakhe ngasese kanti nabazali bakaBabes ubasola ngokuba yizigebengu ngoba bekumele bakhulume naye kuboniswane.
Uphethe ngokuthi akamfuni noma ambone uBabes futhi akakufihli lokhu ufisa kwaziwe yizwe lonke ngoba abanalo iqiniso nomndeni wakhe. Udadewabo kaBabes noyimenenja uNondu umshiye nesiqalekiso sokuthi akazi uyozala nhloboni, mhlawumbe uyobeletha ikati.